Caqabado Hor leh oo soo wajahay Dacwada Badda iyo Kenya oo Badashay............
HomeWararka MaantaCaqabado Hor leh oo soo wajahay Dacwada Badda iyo Kenya oo Badashay…………
Caqabado Hor leh oo soo wajahay Dacwada Badda iyo Kenya oo Badashay…………
February 21, 2021 Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Dowladda Kenya ayaa waxaa la sheegay inay dhamaan bedeshay qareenadii u doodayay dacwadda Badda ee kala dhaxeeysa Soomaaliya, iyada oo Magacaawday 8 qareen oo Cusub.
15-ka Bisha Maarso 2021 ayaa loo balansan yahay inay bilaabato dhageysiga dacwadda Badda , waxaana 8 qareen 7 kamid ah ay yihiin Ajaanib halka Xubinta 8aad uu yahay Kenyan, taas oo lagu Magacaabo Prof Phoebe Okowa.
Qareenada Cusub ee Kenya u Magacaawday dhageysiga dacwadda Badda ee kala dhaxeysa Soomaaliya ayaa waxaa hoggaminaya Prof Sean Murphy oo ka tirsan George Washington School of Law & Garsoore hore Tullion Treves.
Hoggaamiyaha qareenada Prof Sean Murphy ayaa mar kamid ahaa qareenadii kasoo muuqday Maxkamada Caalamiga ah ee Cadaalada (ICJ) xilli ay socotay kiiska u dhaxeeyay dalalka Peru iyo Chile., waxaana dhamaan qareenada Kenya ay u magacaabatay dhageysiga dacwadda Badda ee kala dhaxeysa Soomaaliya ay kala yihiin Magacyadooda.
1: Hoggaamiyaha qareenada oo lagu Magacaabo Prof Sean Murphy oo ka tirsan George Washington School of Law
2: Garsoore hore iyo bare Culuumta Sharciga ka dhiga dalka Ingiriiska Tullion Treves.
3: Prof Laurence Boisson De Chazournes oo isna khabiir ku ah sharciga caalamiga kana socda jaamacadda Geneva ee dalka Switzerland.
4: Prof Phoebe Okowa, oo bare ka ah Sharciga Caalamiga ee Jaamacadda Queen Mary ee London ayaa ah qofka kaliya ee Kenyanka ah, waxaana ay qeyb ka aheyd dacwada badda ee Gambia ka gudbisay Myanmar.
5: Prof Makane Mbengue, oo reer Senegal ah, oo ka dhiga sharciga caalamiga ah Jaamacadda Geneva.
6: Christian Tams, oo bare ka ah Jaamacadda Gasglow. Waa Muwaadinad Jarmal ah, iyada oo dhowr jeer ka soo muuqatay isla maxkamada kiisas kala duwan.
7: Eran Sthoeger oo laga keenay Israel, waxaana uu ka qeyb qaatay kiisas u dhaxeeyay dalalka Peru & Chile.
8: Madaxweynaha Nuqulada Juquraafiga Coalter Lathrop, kaas oo qareenada ka caawin doona sawir gacmeed iyo sharciyeed kooxda Kenya ee xadka iyo xuduudaha badda.
Ugu dambeyn qareenada ay dowladda Kenya bedeshay ayaa waxaa ay kala yihiin, ah Karim Khan, Payam Akhavan oo Mareykan ah, Makena Muchiri oo Kenyan ah, Vaughan Lowe & Alan Boyle oo u dhashay dalka Ingiriiska , Mathias Forteau oo u dhashay dalka Faransiiska iyo Amy Sanders British ah.
Dowladda Kenya ayaa dooneysay in markii afaraad dib loo dhigo kiiska badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya, hayeeshee Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ ayaa laashay, waxaana loo balansan yahay in la qaado 15-ka Bisha Maarso, waxaana Go’aanka Maxkamadda soo dhaweeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Darawal Moota Bajaaj oo Muqdisho Lagu Toogtay.